Musika wegore rino wekushongedza zvipfeko unobvumira vazhinji vevashandi vekugadzira machira avo vane mafekitori kusangana kekutanga iyo "mari yemombe" mumakore apfuura yakave mutoro unorema. Pakati pehafu yekutanga yegore anenge mafekitori ezvimwe zvipfeko aive mumamiriro ekudzikira, mutengo wepamusoro uye zvisina kunaka purofiti.
Denda repasi rese richiri kungopenga, huwandu hwematare matsva akasimba ari kuwedzera zuva rega rega, mirairo yekutengeserana nevekunze ingangoita kutombovimba, uye mwaka wakaderera wezvipfeko muna Chikunguru na Nyamavhuvhu, pamwe nekupisa kunotevera kunaya kwemvura. vanoita kunge vakawedzera munyu kumaronda emwaka wakaderera. Musika wemicheka uri kuita sei pasi pekushamisika kunoteedzana?
Kuruka kwacho kwakupa, kungave pazororo kana kutengesa kunze
Pakati pemhando dzese dzemafekitori emachira gore rino, iyo yakasindimara zvikuru ndiyo fekiseni yekusuka. Pakati pehafu yekutanga yegore, kunyangwe kana pasina akadaira, mafekitori mazhinji emachira achiri kuchengeta yakakura kuvhura, kana kunyangwe nyika yakazara kuvhura. Asi kushomeka kwegrey jira haigoni kuyerera kusvika pakadzika, simba remuchina wefekitori harigoni kumira kwenguva inodarika hafu yegore. " Uswa hwekupedzisira hwatyora ngamera yengamera ”zvinoita kunge hwasvika, munguva pfupi yapfuura kuderera kwemusika kuruka kuri pachena!
“Tine chete mazana maviri emabhanzi, asi kuwanikwa kweanopfuura mamirioni maviri. Izvo hazvitaridzika sezvakawanda, asi mwedzi miviri yekugadzirwa kwedu. Imwe nguva yapfuura, muchina hauna kuzeza kumira, kutya kune vashandi vezororo kuenda, kunyangwe kuzororo iriwo mafekitori mashoma akatenderedza kuti tikurukure pamwe. Asi mwedzi uno wave wakawandisa kutakura, kana nguva yekupisa ichinge yaipisa, tinoisa isu pachedu kwevhiki. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, zvinogona kunge zvichingovapo uye nekubva. ” Munhu anotarisira fekitori yemachira.
Muchokwadi, kune akawanda akafanana emabhizinesi mumusika vanosarudza kuva nezororo. Munguva yekutanga, mabhizinesi mazhinji akaruka achiri kuchengeta yakakura yekuvhura pasina akadaira, kureva kuti vari kugadzirira zororo mumwaka wekunze uye unopisa muna Chikunguru naAugust. Ehezve, haasi ese makambani anoruka angagone kumira mukukuvara-kwemwaka, vanovimba nemusika mushure mechirimo.
Parizvino, mabhizinesi mazhinji okusuka akaoneka pamusika, uye "indekisi" yakakosha mumakore apfuura yakatengeswa. Munguva yemazuva ano yakaoma yemamiriro ekunze, izvi zviratidzo zvoda kupera kunyorwa uye zvinofanirwa kunge zvichidikanwa, asi pachokwadi pane vanhu vazhinji vanoda kubvisa ivo uye vashoma kutora nzvimbo.
Mukupesana kwakanyanya neindasitiri yekucheka, iyo yekudyara mamiriro efekitori mumwaka usina-yakaipa haina kushata, kana kutoti zvirinani. Jira jira mune yekuchengetedza huwandu hwakagadzikana, nguva yekuvhuvhu uye yechando inoraira zvakabudirira zvinopihwa
Kunyangwe kudhiza nekucheka mafekitori anotarisana nemusika mumwechete wekupfekera gore rino, asi hazviratidzi mamiriro akafanana. Vazhinji vehafu yekutanga yegore inenge yakakwirira yakavhurika mukana wepasirese, ichangobva kuderedzwa zvakanyanya zvakanyanya; Asi kudhaya fekitari kwakaramba kuchizarura mukana wekusimba, uye kunyangwe kupora kushoma munguva pfupi iri kutevera.
Maererano nemunhu anotarisira fekitori yekukwepa, chimiro cheficha yekudyira izere haisi yakaipa munguva pfupi yapfuura. Iko kudya kwemazuva ese kwejira jira kunodarika mazana mazana mana emamita, uye mukana wekugadzira unogona kuchengetwa unopfuura makumi matanhatu muzana. Kunyangwe ichienzaniswa neyekugara zuva nezuva yekugara inosvika mazana matatu ezviuru kusvika mazana mana emamita mazana epamberi, uye kupfuura makumi mashanu muzana ezvigadzirwa zvekugadzira, shanduko haina kukura zvikuru. Nekudaro, mumwaka wekupfuura waChikunguru naAugust pasi pechirwere, kuita kwakadai kwave kwakanaka kwazvo. Iwe unofanirwa kuziva kuti munguva yakapfuura-mwaka wechirimo, huwandu hwesitoko hwaive mazana mana emakumi mashanu-500,000 emamita, uye huwandu hwekugadzira hwaive chete 60% -70%.
Saka pane zvese, iyo yekudyara fekitori yaita zvakanaka mu-mwaka wegore rino. Mazhinji mafashoni ekuchera akave akazadzwa nemachira, uye mamwe acho anotomirira mumutsara. Uye parizvino zvigadzirwa zviri mudhiza rekukweva ndezvimwe zvinotevedzera zvekunyepedzera, kupenga nekutenderera uye zvimwe zvigadzirwa zvemachira / yechando, kunyange paine ichiri chinhambwe kubva mwaka yekusvika yekuvhuvhu / nguva yechando munaGunyana uye Gumiguru, asi kwave paine yakawanda mhando akatanga kutungamira, kuyedza musika!
Muchokwadi, zvine musoro kuve nekutsauka kwakadaro mumusika wefekitori yekugadzira machira uye fekitori yekugadzira dhizaini. Iyo fekita yekucheka inokwanisa kuchengeta jira jira kusvika vatengi varaira, uye mafekitori ese okusuka haangakanganise kutengesa kwemachira. Izvo chete kushayikwa kwemari yekushanda, iyo nguva yekuraira kurongeka inogona kuita kuti vanhu vazhinji vemicheka vatadze kuvimba, asi sarudza kumisa kurasikirwa uye kusiya munguva.
Uye dhayi imba pane guta guru uye yekutevera, ine mhedzisiro mukana. Chekutanga pane zvese, nekuti ndiko kugadzirwa kwezvinhu zvinouya, kudhiza fekitari hakusi kwekutsvaga backlog, hapana kuwanikwa hakuzi kuwanikwa capital capital. Uye zvakare, kunyangwe kushayikwa kwemirairo kwakaita kuti mafekitori mazhinji ekudaya acheke mitengo, asi kuunganidzwa kwemari kunogona kuvimbiswa kwazvo. Pasi pechifungidziro chekuti capital chain inogona kuvimbiswa, kugona kwekupukuta kwekuumba dhiza kwakasimba zvakanyanya. Pnguva imwechete, zvichienderana nekushomeka kwemafekitori emucheka, akaiswawo kumuchina wedhayi pamusika chinzvimbo chakasimba.
Nguva yekutumira: Aug-03-2020